सन्दीप बन्लान त आईसिसीको ‘प्लेयर अफ द मन्थ’? | सबै खेल
सन्दीप बन्लान त आईसिसीको ‘प्लेयर अफ द मन्थ’?
२० आश्विन २०७८, बुधबार १५:२६
नेपाली लेगस्पिनर सन्दीप लामिछाने आईसिसीको प्लेयर अफ द मन्थको मनोयनमा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसिसी)ले सेम्टेम्बरका लागि सन्दीपलाई समेट्दै प्लेयर अफ द मन्थका लागि उत्कृष्ट तीनको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो।
प्लेयर अफ द मन्थका लागि सन्दीपसँग बंगलादेशी स्पिनर नसुम अमद र अमेरिकी विस्फोटक ब्याट्सम्यान जस्करण मल्होत्रा पनि नोमिनेसनमा परेका छन्।
आईसिसीका प्लेयर अफ द मन्थको नोमिनेसनमा पर्ने सन्दीप दोस्रो नेपाली क्रिकेटर हुन् । यसअघि नेपाली ओपनर कुशल भुर्तेल पनि नोमिनेसनमा परेका थिए।
ओमान भ्रमणमा गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शनका आधारमा सन्दीप आईसिसीको प्लेयर अफ द मन्थको नोमिनेसनमा परेका हुन्। ओमान भ्रमणमा सन्दीपले ६ खेलमा कुल १८ विकेट लिएा थिए ।
आईसिसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गतको सिरिजको तयारी लागि खेलिएको पपुवा न्युगिनीविरद्धको एक दिवसीय सिरिजको एक खेलमा सन्दीपले ११ रन खर्चेर १ विकेट लिएका थिए। सोही प्रदर्शन पछि सन्दीप आईसिसी एकदिवसीय क्रिकेटको बलिङ ¥याङकिङमा सन्दीप ७९औं स्थानमा उक्लिएका छन्।
यस्तै, नसुम अहमदले न्युजिल्यान्डविरुद्धको टि–२० सिरिजमा उत्कृष्ट प्रर्दन गरेका थिए । सो सिरिजमा उनले कुल ७ विकेट लिएका थिए । उनले सिरिजको चौथो खेलमा १० रनमात्र खर्चेर ४ विकेट लिएका थिए । नसुमको उत्कृष्ट प्रदर्शन मद्दतमा बंगलादेशले सिरिज ३–२ले जितेको थियो।
यस्तै, मल्होत्राले पनि आईसिसी विश्वकप लिग२ मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । उनले पपुवा न्युगिनीविरुद्ध १७३ रन बनाएका थिए। सो सिरिजमा उनले ६ खेलमा कुल २६१ रन बनाएका थिए। एकदिवसीय क्रिकेटमा एकै ओभरमा ६ छक्का प्रहार गर्ने उनी चौथो क्रिकेटर हुन््।
Tags: sandeep lamichhane
साहब र सागर चम्किँदा चिवतन फाइनल, पोखरा ९ विकेटले पराजित
द राइजिङ क्लब धरानलाई हराउँदै स्पोर्ट्स क्यासल फाइनलमा